Soomaalida qaar keed miyey baalmareen xikmaddii soonka? - BBC News Somali
Soomaalida qaar keed miyey baalmareen xikmaddii soonka?
Image caption Ramadanka waa tiir ka mid ah shanta tiir ee Islamka
Sannad walba Muslimiinta caalamka waxaa soo marta hal bil oo ay xilliga maalintii ah cuntada ka soomaan, laakiin waxaa su'aalo badan la iska weydiiyaa sida ay Soomaalida u maareyso raashin cunista, inta bishaas lagu guda jiro.
Dad badan ayaa caafimaad ahaan uga faa'iideysta bisha Ramadaan iyagoo iska yareeya raashinka isla markaana sameeya cibaado iyo jimicsi faro badan.
Hase yeeshee bulshada Soomaalida ayaa lagu dhaliilaa in bisha Ramadaan ay xoogga saaraan raashinka, iyagoo ku dadaala inay wax badan cunaan.
Bisha Ramadaan raashin cunistu miyey yaraataa mise way badataa?
Sheekh Cali Guure oo ka mid ah culumada magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi bari Kenya ayaa BBC-da wareysi uu siiyay ku sheegay in Bisha Ramadaan ay tahay bil cibaado oo aysan ahayn bil cunto.
Muxuu yahay isbaddalka jirkaaga ku yimaada marka aad sooman tahay?
Shiinaha oo Muslimiinta dalkaasi ciqaab adag ku hayoLix quraafaad oo dadka qaar ay Ramadaanka ka aaminsan yihiin
Shiinaha oo Muslimiinta dalkaasi ciqaab adag ku hayo
Balse wuxuu dhanka kale xusay in dadka ay bishan xoogga saaraan raashinka.
"Haddii caawa oo dhan wax la cuno, oo raashinka la iska badiyo, maalintii oo dhan waxay dhamaaneysaa iyadoo la dharagsan yahay oo la daaco qurmayo, mana la soo xasuusanayo masaakiin baahan".
Sidoo kale waxa uu ka hadlay ganacsatada ka faa'iideysta baahida ay dadka u qabaan raashinka iyo maacuunta.
"Markii ay dadkii beec mushtarka ahaayeen arkeen in bisha soonka ay tahay bisha la dhargo ee cuntada aad xoogga loo saaro, suuqana aad mashquul looga dhigo, waxay go'aansadeen inay wax walba sare u qaadaan", ayuu yidhi Sheekha.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in diintu ay xaaraantinimeysay in ganacsatadu ay keydiyaan raashinka oo marka dambe ee uu yaraado ay dadka qaali uga iibiyaan.
Xilliga Soonka ayaa waxa Muslimiinta looga baahanyahay inay ka haraan Wax cunista, cabidda, iyo galmada ayaa sidoo kale mamnuuc ah inta lagu gudo jiro saacadaha soonka.
Maadaama calendar-ka Islaamku uu yahay midka dayaxa, bisha Ramadan sanad kasta waxay gadaal usoo durugtaa qiyaastii 11 maalmood.
Taas macnaheeduna waa in Muslimiinta kunool bariga dhexe ay saacadaha soonku usoo yaraan doonaan sanadba sanadka uu ka dambeeyo.
Quraafaadyo ku saabsan Ramadaanka
'Waa in aad Soontaa wax walba oo dhaca'
Islaamka, Soonka ayaa waxa uu waajib ku yaahay qof caafimaadka qaba islamarkana qaan gaaray ilaa 15 jir.
Waxaa dadka uu Soonka waajib uusan ku ahayn ka mid ah caruurta, dadka xanuunsan jir ahaan ama maskax ahaan, dadka tabarta yar, kuwa safarka ku jira, haweenka uurka leh iyo kuwa caruurta nuujinaya, sida ay sheegeen Golaha Muslimiinta Britain (MCB).
"Haddii qofka xilliga Ramadanka uu qof xanuunsan yahay balse uu rajaynayo in uu bogsado - waxa uu qofka Soomi karaa mar kale,"ayuu yiri Mr Xassan.
"Haddii qofka xanuunkiisa uu yahay mid dheer islamarkana uusan Soomi Karin waxa uu bixinaya fidyah - ama deeq uu siinayo maalin waliba dadka fuqarada ah.
'Ma qaadan kartid daawo '
Golaha Muslimiinta Britain (MCB) ayaa soo saaray digniin wadajir ah oo ay ugu baaqeen ururka caalamiga ah ee dhaqaatiirta indhaha in daawooyiinka qaar ay bukaanada sii wadan karaan sida daawada indhaha lagu shubo.
Golaha Muslimiinta Britain (MCB) waxa ay sidoo kale soo saareen liis dhanka caaafimaadka ah oo isbataalada loo qaybiyay gaar ahaan xilliga Ramadanka.
Waxaa liiskani waxyaabaha ku qoran ka mid ah in qofka Sooman la siin karo daawooyiinka indhaha , dhagaha iyo qaadashada irbadaha.
Hasa yeeshee in qofka uu daawo laqo ayaa burinaya Soonka islamarkana daawooyiinkasi waa in uu qofka qaataa Soonka ka hora ama ka dib.
Mr Xasan ayaa yiri: "marka ugu horeysa, haddii ay kula soo gudboonaato xaalad caafimaad, waxa kowaad ee aad is waydiinayso waa, ma la iiga baahan yahay in aan Soomo?
"Waxaa quraanka ku cad ayaa ah in mar waliba aad raacdo talada dhakhtarka".
'Ilkaha oo aad cadeeyato waxa uu burinayaa Soonka"
Ilkaha oo aad cadeeyato ma burinayo Soonka sida ay culumada aaminsan yiihiin.
Mr Xassan ayaa sheegay in dadka qaar si khaldan ay u aaminsan yihiin in dhadhanka cadeyga uu qofka ku rumaysanayo ay ku filantahay in uu Soonka ka buro.
In kastoo culumo badan ay sheegeen in qofka uu ilkaha cadeysta aysan waxba ku jabnayn, Mr Xassan waxa uu hayaa tillaabooyiin dhowr ah oo qofka uu taxadar ku muujin karo.
"Talada ugu wanaagsan waa in cadey dhexdhexaad ah aad isticmaasho-waana in uusan adkeen."